Farraarre (Mars) – Garanuug
Home / Abwaan / Farraarre (Mars)
Tifaftireyaasha Abwaan May 6, 2016	Abwaan, Saynis Leave a comment 6,643 Views
Farraarre waa meeraha afraad ee bah-qorraxeedka, waana meeraha dhulka ugu dhow, baaxad ahaanna waxa uu le’eg yahay qiyaastii dhulka badhkii, oo dhexroorka Dhulku waa 12,756 km, ka Farraarrena waa 6,787 km. Oogadiisu waxay leedahay midab casuus ah sida dhulka hawdka ah, waxaana lagu naanaysaa Meeraha Cas.
Isbarbardhigga Dhulka iyo Farraarre.
Gibilka hawo ee ku hareeraysani waa mid khafiif ah oo u badan kaarboon laba-oksaaydh (95%) iyo naaytrojiin (3%), cadaadiskiisuna ilaa 100 jeer ayaa uu ka hooseeyaa cadaadiska hawada dhulka. Sidaas awgeed waa ay adag tahay in lagu neefsado. Heerkulka meerahani waa uu hooseeyaa waxa uuna u dhexeeyaa -153oC ilaa 20 oC. Cadaadiska hawo ee hooseeya iyo heerkulkaas qaboowi waxa ay sababaan in aysan oogadiisu lahaanin biyo hoor ah. Biyuhu markiiba way berfayaan ama uumibaxayaan.
Wareeggiisu aad ayaa uu ugu dhow yahay wareegga dhulka oo maalintiisu waa 24.6 saacad dhuleed, laakiin sannadkiisu waa uu dheeryahay oo waa 1.88 sannad dhuleed.
Labada dayax ee Farraarre
Fagaagbuldiyeyaal badan ayaa ku dagey oogada Farraarre waxayna soo direen sawirro iyo xog saynis oo aad u badan. Sawirradaas waxaa ka muuqata in oogada Farraarre ay aad ugu egtahay degaannada saxaraha ah. Taas ayaana sababtay in dedaal badan lagu bixiyo wax ka barashada meerahan. Waxaaba la qorshaynayaa in sannadka 2026 dad loo diro oo laga sameeyo meelo dadku degi karaan. Arki doonnee.
Fagaagbuldiyaha Curiosity oo ku sugan oogada Farraarre
Qorshaha degaan ka samaynta Farraarre
Fagaagbuldiyaha Curiosity oo ku sugan oogada Farraarre.
bah-qorraxeed farraarre marriikh mars meere Nasa saynis	2016-05-06
Tags bah-qorraxeed farraarre marriikh mars meere Nasa saynis
Next Godob Jaceyl iyo Gallad Eebbe
Bayooloji: Nolol-Aqoon (Biology)
Waxaraxir/ Xiddig Waaberi/ Maqala Xidhxidh/ Sahra (Venus)
Waa meeraha labaad ee bah-qorraxeedka marka dhanka qorraxda laga soo tiriyo. Meerahani waxa uu muuqdaa ...
Dusaa/ Cudaarid (Mercury)
Waa meeraha ugu dhow qorraxda, uguna yar siddeedda meere ee bah-qorraxeedka. Xilliga la arki karaa ...
March 30, 2017	230,463